कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् फाल्गुण १ गते बुधबारको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् फाल्गुण १ गते बुधबारको राशिफल
श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल फाल्गुन १ गते बुधबार इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी १३ तारीख माघ शुक्लपक्ष अष्टमी तिथी १०ः३८ बजे सम्म उप्रान्त नवमी तिथी कृत्तिका नक्षत्र १७ः५६ बजे सम्म उप्रान्त रोहिणी नक्षत्र ऐन्द्र योग वालव करण चन्द्रमा बृष राशिमा आनन्दादियोगमा सिद्यि योग सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु बुधाष्टमी, भीष्माष्टमी ,गोरखकाली पूजा , फाल्गुन संक्रान्ती विश्व रेडियो दिवस :ज्यो.पं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर
कार्य सम्पादनमा बिशेष गोप्यताको आवश्यक रहनेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानी उत्तम रहनेछ । वाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्त्तता देखा पनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
नयाँकार्य थालनीको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रबाट सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको योग रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिने दिन रहेकोछ ।
स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती अधिक धनराशी खर्च गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । पारीवारिक झोर झमेलाका कारण परीवार भन्दा टाढाँ भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेकोछ ।
आम्दानिका श्रोत उत्तम रहेता पनि सामान्य झन्झटको सामना भने गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । कार्य स्थल परीर्वतनको सम्भाबना समेत रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती सामान्य परीश्रम खर्चनु पर्ने दिन रहेकोछ ।
मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । कार्य कुशलताका कारण मानसम्मान प्राप्तीको समेत योग रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित हनेछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको योग रहेकोछ ।
कार्यसम्पादनमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ अन्यथा सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । शारीरिक आलस्याताले सताउन सक्नेछ । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाब देखा पर्नेछ ।
खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सावधान रहनु होला । सामान्य चोट पटकको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुनाले सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । सर सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
पारीवारिक मनोरञ्जनका निम्ती अधिक समय ब्यतित रहनेछ । अधुराका पुन सुचारु गर्दा निक्कै लाभ प्रााप्त रहनेछ । आफन्तजन हरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । भोज भतेर जन्य कार्यमा सगभागीताको योग बन्नेछ ।
नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि महसुस रहनेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले हरकदममा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्य हरुबाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।
बौधिक ब्यत्तित्वहरु सगँ भेटघाटको योग बन्नेछ । अध्यन अध्यापनमा त्यति समय दिन सकिने छैन । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा जुट्नाले आम्दानि मध्यम रहनेछ । मानसिक चन्चलताले कार्य क्षेत्र दिगो नरहला ।
भौतिक श्रोत साधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहनेछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्ने दिन रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । मान्यजन सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता रहनेछ ।
मित्रजनहरु सगँको अधिक सामिप्यता कष्टकर साबित रहन सक्नेछ । यात्राका निम्ती अधिक समय खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । अधिक आत्मबिश्वासका कारण भई सकेका कार्यका क्षेत्रबाट अपजसको सामना गर्नु पर्नेछ ।